Vokatra vita patanty
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2016 izay ahitana vondrona teknisianina sy varotra manana traikefa manankarena amin'ny fiampangana tsy misy tariby finday. Ny teknisiana, izay manana traikefa 15 ~ 20 taona amin'ny fitantanana ny famokarana, ny tetik'asa fanovana teknolojia ary ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fiampangana tsy misy tariby, dia avy amin'ny Foxconn, Huawei ary orinasa malaza hafa. Mifantoka amin'ny R&D izahay, famokarana fitaovana fiampangana tsy misy tariby ho an'ny finday, earphone TWS ary famantaranandro paoma, ary manome vahaolana famandrihana tsy misy tariby matihanina. Izahay dia mpanamboatra mpikambana WPC sy USB-IF. Ny ankamaroan'ny charger tsy misy tariby dia nandalo QI, MFI, CE, FCC, RoHS fanamarinana. Ny vokatra rehetra dia modely natao namboarina miaraka amin'ny patanty fisehonay manokana.
lantaisi / Filozofia
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra elektronika avo lenta sy ny vahaolana mba hamoronana fandresena-fandreseny fiaraha-miasa sy hametraka maharitra sy maharitra fampandrosoana ny fifandraisana stratejika.
lantaisi / Kolontsaina
● Iraka: Mamorona lanja ho an'ny mpiara-miombon'antoka, manatsara ny fahasambaran'ny mpiasa, ary mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy.
● Vina: ho mpitarika ny indostrian'ny vokatra elektronika vaovao.
● Filozofia: Amin'ny alàlan'ny fanatsarana tsy tapaka, mba hanomezana vokatra sy serivisy sarobidy ho an'ny mpampiasa.
● Sanda: Miompana amin'ny mpampiasa, fahatsoram-po ary fanoloran-tena.
Ny orinasanay dia nohamarinina ho mpanamboatra mari-pankasitrahana MFI mpikambana ao amin'ny Apple. Amin'izany fotoana izany dia mpikambana mpanamboatra WPC sy USB-IF izahay. Ny ankamaroan'ny charger tsy misy tariby dia nandalo fanamarinana QI, MFI, CE, FCC ary RoHS.
Miezaka hatrany izahay vokatra avo lenta, tsy misy kilema, azo antoka ary miaro ny tontolo iainana. Ny fanomezan-toky ny mpanjifa no filozofianay momba ny fandraharahana, noho izany dia manana fanaraha-maso hentitra ny kalitaon'ny vokatra izahay.
Manana famolavolana vokatra matihanina sy ekipa R&D izahay miaraka amin'ireo teknisianina avy amin'ny orinasa malaza toa an'i Foxconn sy Huawei. Manana 15-20 taona amin'ny fitantanana ny famokarana, vahaolana amin'ny fanovana ara-teknika ary traikefa ara-teknika eo amin'ny sehatry ny fiampangana tsy misy tariby.
Manome vahaolana namboarina sy novolavolaina ho an'ny vokatra famandrihana tsy misy tariby izahay, izay afaka mamaha olana ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy ary miezaka ny tsena aloha.